Raràn’i Shina Ny Vaovao Alaina Any Amin’ny Haino Aman-Jery Sosialy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Jolay 2016 17:57 GMT
Ilay Rindrin'afo Lehiben'i Shina. Sary avy amin'ny Digital Trends.
Noraràn'ny fitantànana ny tontolon'ny aterineto, ilay mpandrindra fara-tampon'ny aterineto any Shina, ireo mpamoaka vaovao mba tsy hitanisa ireo lahatsoratra avy amin'ny haino aman-jery sosialy ho toy ny loharanom-baovao. Ao anatin'ny fepetra henjana raisina amin'izao fotoana izao hamoretana ny vaovao “diso” sy ny tsaho io politika vaovao io.
Tamin'ny fiandohan'ny volana Jolay ireo haino aman-jery rehetra mpilaza vaovao no naharay filazàna ôfisialy momba ilay fandraràna, araka ny fanambaràna navoaka tao amin'ny tranonkalan'ilay Fitantànana ny alin'ny 3 Jolay. Ilay fanambaràna, izay nitanisa ” vaovao noforonina” marobe mivezivezy amin'ny aterineto, dia nilaza fa nosazian'ny manampahefana ireo mpamoaka vaovao am-polony, isan'izany ny Sina, Caijing, Tencent, ary ny NetEase ary noteren'izy ireo hamono ny kaontin'ireo mpilaza vaovao sasany noho ny fampiasàny ny haino aman-jery sosialy ho loharanom-baovao.
Nohamafisin'ilay filazàna fa :
Tsy maintsy manaraka ny toromarika mahitsy amin'ny fitarihana ny saim-bahoaka sy maka fepetra izay ahazoana antoka fa tena nisy, feno, marina ary tsy mitanila, ilay vaovao. Voarara ny fihazakazahana mampahalala vaovao avy amin'ny fampiasàna ireo vaovao tsy voamarina voalaza ao amin'ny vovonan'ny haino aman-jery sosialy. […] Tokony handray andraikitra amin'ny fitantànana ny sampan-draharahan'ny fanomezam-baovao amin'ny alàlan'ny finday ny tranonkala rehetra, tahaka izany koa ny Weibo, ny Wechat sy ireo hafa, mba hahazoana antoka fa voafehy ny fizotry ny fanoratam-baovao. Raràna indrindra ny fitanisàn'ny tranonkala ny loharanom-baovao tsy mitonona anarana na sandoka ary mamorona vaovao mifototra amin'ny honohono, zavatra tsy marina na nofinofy.
Roa andro aty aoriana, nisy fanambaràna navoakan'ny masoivohom-baovaom-panjakana Xinhua fa ho henjana kokoa ny sazin'ireo haino aman-jery mpamoaka vaovao raha tsy manatanteraka ilay politika vaovao. Naely tamin'ny haino aman-jery sosialy niaraka tamin'ireo hafatra mamerina ny fiantraikany ratsy ateraky ny famoronana vaovao any amin'ny fiarahamonina.
Notanisain'ilay Fitantànana ny Tontolon'ny Aterineto ireo tantara isankarazany izay ahitana vaovao “tsy marina”, miaraka amin'ny lohateny toy ny hoe :
Roa no maty ary folo naratra tamin'ilay fiara fitateram-bahoaka niniana nodorana tany Changsha
Taorian'ny zava-nanjo an'i Wei Zexi, dia nametraka antso maitso ho an'ny olona 100 voan'io aretina io ny birao fanaterana taratasy sy fitarainana.
Mandositra ny tanàna ny ankizivavy any Shanghai mandritra ny taom-baovao
Aongan'ny vinantovavy avy any an-tanàndehibe ny latabatra fisakafoanana any ambanivohitra mandritra ny taom-baovao.
Ny lahatsoratra roa voalohany dia noforonina avy taminà tantara nisy taloha. Ohatra, ilay fiara fitateram-bahoaka niniana nodorana dia naverina nosoratana avy taminà tati-baovao tamin'ny 2010.
Ireo tranga anankiroa farany kosa dia tantara fohy navoaka tamin'ny aterineto mba handrisihana ny fifanakalozan-kevitra momba ny fifandraisan'ny lahy sy ny vavy any Shina, saingy diso fandray ireo haino aman-jery mpamoaka vaovao ka nataony fa tena nisy ilay izy.
Indraindray misy trangan-javatra tsy voamarina alain'ny mpanao gazety ao amin'ny haino aman-jery sosialy, fa minia tsy miraharaha ny fiantraikany tsara avy amin'ny vaovao nalaina avy amin'ny haino aman-jery sosialy ny Fitantànanany Tontolon'ny Aterineto.
‘Ndeha ho raisina ny tranga nanjo an'i Wei Zexi, izay nalaina tamin'ny haino aman-jery sosialy. 21 taona izy ary mpianatra teny amin'ny ambaratonga ambony. ‘Sacrome synovial’ (homamiadan'ny vanin-taolana) no nitarika ny fahafatesany tamin'ny volana Aprily rehefa nandanian'ny fianakaviany volabe taminà fitsaboana tsy izy izay vao mainka nampihombo ny aretiny. Tamin'izany, izay noheverin'izy ireo fa vokatry ny fikarohana tao amin'ny Baidu no nanorenany ny fanapahankeviny. Orinasa goavana mpikirakira ny aterineto any Shina ny Baidu, saingy dokambarotra raha ny marina. Niteraka resabe momba ny olan'ny doka fanaon'ilay milina fikarohana sy ny fikorontanan'ny rafitra ara-pahasalaman'ny Shinoa ity tantara manokana mirakitra ny lahatsary fjoroana vavolombelon'i Wei ity, izay nalaina taloha kelin'ny nahafatesany. Farany, niditra an-tsehatra ihany ny Fandrindràna ny Tontolon'ny Aterineto mba hanenjana kokoa ny lalàna mifehy ny dokambarotra amin'ny milina fikarohana.
Chang Ping, Shinoa mpanao gazety malaza mipetraka any Alemaina amin'izao fotoana izao dia nanamafy fa na dia naelin'ireo haino aman-jery mpampahalala vaovao amin'ny aterineto aza ireo tantara sasany “noforonina”, ny ankamaroan'ireny dia vaovao mahavariana ao an-toerana fotsiny ihany izay zara raha misy fiantraikany na tsy misy mihitsy raha ampitahaina amin'ireo vaovao foronin'ny governemanta momba ny fampandrosoana ny firenena :
Ara-tantara, dia ireo haino aman-jery mpampahalala vaovao akaiky ny fitondrana no mirona kokoa amin'ny fanolorana vaovao noforonina. Ratsy kokoa aza ny firaketana ny zavabitan'ireo haino aman-jery mpampahalala vaovao fehezin'ny fanjakana. Ohatra, lainga no navoakan'ny China Daily, Xinhua News ary ny CCTV izay nilaza fa 10.000 catty-nà varimbazaha no vokatra amin'ny tany iray mu [0,667 hektara] [nandritra ilay fandaharanasa ara-tsosialy sy ara-toekaran'i Mao Zedong nantsoina hoe Dingana Lehibe], tsy nisy mihitsy ny vonoan'olona tany Tiananmen tamin'ny 4 jona , izay nampisondrotra voninahitra ireo KAominina Irahan'ny Vahoaka Mitantana, ny voninahitry ny nofinofy Shinoa, ny jadon'ny mpiasa madinika [ fotokevitry ny politika maoista nandritra ny revolisiona ara-kolotsaina] sy ny fampanjakàna ny lalàna [ amin'ny fitondran'ny Filoha Xi Jinping amin'izao fotoana izao ]
Nanomboka tamin'ny volana Aprily 2015, dia nampiditra andiana politika mba hifehezana mafimafy kokoa ny vavahadin-tserasera amin'ny aterineto sy ny tranonkalam-baovao ny Fandrindràna ny Tontolon'ny Aterineto. Nangonin'ny mpitoraka bilaogy Lanjinger ny fifandimbiasan'ny daty :
• 28 Aprily 2015 : namoaka ny “fitsipika 10 ho an'ny resadresaka” ny fandrindràna ny tontolon'ny aterineto. Takian'ilay fitsipika ny hanaovan'ny mpitantana ilay tranonkala “dinidinika” amin'ny manampahefana taorian'ny tsy nahavitan'ilay tranonkala nanome ny vaovao ara-dalàna. Misy tranga sivy voatanisa ao amin'ilay fitsipika ary ireo tranonkala izay tsy mahavita manatsara ny fitantanany aorian'ilay dinidinika, dia mety ho foanana ny fahasoandàlany.
• 24 Oktobra 2015 : nanao latabatra boribory niaraka tamin'ny solontenan'ireo orinasa mba hifanakalo hevitra momba ny ” fampiharana ny lalàna mifehy ny tontolon'ny aterineto” ny Fandrindràna ny tontolon'ny aterineto.
• 6 May 2016 : Neken'ny Fandrindràna ny tontolon'ny aterineto ireo habantranonkala enina fehezin'ny fanjakana, isan'izany ny fanomezan-dàlana ny Renminwang sy ny Xinhua Net mba hitantana fantsna fampitambaovao any amin'ny faritany. [ Nataon'ny rafitra mpanome fahazoandàlana ao an-toerana ho tsy ara-dalàna ireo fantsona hafa mpampita vaovao izay tantanin'ireo vavahadin-tserasera hafa. Ireto ireo tranonkala enina nahazo alàlana : Renminwang, Xinhua, China Radio International, China Daily, Guangmingwang ary ny onjampeom-pirenena Shinoa.]
• 21 Jona 2016 : ilay fandrindràna ny tontolon'ny aterineto dia nanao fihaonambem-pirenena ifanantrehana amin'ny alàlan'ny lahatsary momba ny hanafoanana ny tandavam-panehoan-kevitra amin'ny vaovao mba hananganana drafitra hiatrehana ireo fanehoankevitra momba ny vaovao ao amin'ny haino aman-jery sosialy. Lazain'ireo manampahefana fa manakorontana ny firindran'ny fitsinjaràm-baovao amin'ny aterineto sy ny firindràn'ny fanehoankevitra amin'ny aterineto ny tsikera momba ny vaovao amin'ny haino aman-jery sosialy. Hàlan'ny olona ny zavatra tahaka izany ary mbola ilàna ezaka bebe kokoa.
• 28 Jona 2016 : nambaran'ny Fandrindràna ny Tontolon'ny Aterineto ilay fampiasa fifehezana ny fitantànana mba mba hanenjanana ny fifehezana ny fitantànana ireo fampiharana amin'ny aterineto, hampiroboroboana ny fahasalaman'ilay sehatra ary hiarovana ny zon'ny olom-pirenena, ireo andrim-panjakana napetraky ny lalàna ary ireo fikambanana hafa. [ Takian'ilay fitsipika ny hiraketana ny tena anaran'ny mpisera amin'ilay fampiasa. Maherin'ny 4 tapitrisa ny fampiharana ao amin'ny tsenan'ny fampiasa any Shina.]
Ny teritery atao amin'ireo vaovao amin'ny aterineto sy ny fanehoan-kevitra amin'ny vaovao amin'ny haino aman-jery sosialy amin'izao fotoana izao dia mifanaraka amin'ny ady ideolojika eo ambany fitondran'i Filoha Xi Jinping, izay te-hamerina ny fitondràn'ny Antoko Kaominista Shinoa amin'ny haino aman-jery vaovao sy ny haino aman-jery nahazatra miaraka.